Gurman wuxuu xaqiijinayaa in Aqoonsiga Face-ka uu gaari doono iMac sanadka 2023 | Waxaan ka socdaa mac
Face ID waa tikniyoolajiyadda ay Apple u adeegsato inay ku furto boosteejooyinkeeda iyo wax soo iibsiga iyada oo loo marayo Apple, iwm. Taas waxaa ka mid ah, dabcan, moodooyinka ugu jaban. Laakiin sidoo kale waxaan ka hadalnaa Macs iyo gaar ahaan iMac.
Waqtiga xaadirka ah ee deegaanka Apple, laba habab nabadgelyo oo dibedda ah ayaa ku wada nool aaladda Apple: Touch ID iyo Face ID. Gurman wuxuu leeyahay Touch ID wali waa qayb muhiim ah oo ka mid ah khadadka wax soo saarka Apple, gaar ahaan moodooyinka dhamaadka hoose, iyada oo ay ugu wacan tahay a "Beddelka ka raqiisan" in loo yaqaan 'Face ID' iyadoo la sii wadayo bixinta amniga dadka isticmaala.
Si kastaba ha noqotee, fikradda weriyahan iyo macallinka tiknoolajiyadda, oo ku takhasusay bixinta falanqaynta wanaagsan ee Apple iyo sameynta fikrado ku saabsan mustaqbalka shirkadda iyo qalabkeeda, ayaa ah in qof kastaa ku dhammaado isticmaalka Face ID. Wargeyskiisa Power On, wuxuu ku sheegay in Apple waxay qorsheyneysaa inay u keento Aqoonsiga Face-ka Mac-da gudaheeda "labada sano" ee soo socota.
Laakiin waxaan rajaynayaa in taasi isbedelayso waqti kadib. Ma dhici doonto sanadkan, laakiin waxaan ku qamaami lahaa Aqoonsiga Face ID-ka ee Mac wuxuu imaan doonaa dhowr sano ka dib. Waxaan rajeynayaa in dhamaan iphone-yada iyo ipad-yada ay waliba aadaan Face ID-ga mudadaas gudaheeda. Ugu dambeyntiina, kamarad soo-bandhig ah ayaa gacan ka geysan doonta kala-soocidda qalabka Apple ee qaaliga ah iyadoo laga saarayo darajada sare. Dareemka aqoonsiga wajiga wuxuu siinayaa Apple laba astaamood oo muhiim ah: amniga iyo xaqiiqda la kordhiyay. Taabashada Aqoonsiga, ka sii habboon ama aan ahayn, waxay bixisaa oo keliya tii hore.
Waxaan leenahay naafonimo xaaladdan: Shaashadaha laptop-ka Mac-da ayaa si weyn u khafiifa, taasna ka dhigaysa hagaajinta dareemayaasha qotoda adag looga baahan yahay Aqoonsiga Face-ka. Waan arki doonaa haddii la xallin karo iyo in kale.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Xanta » Gurman wuxuu leeyahay Face ID wuxuu garaaci doonaa iMac sanadka 2023